Shir Ururka UDHIS Ku Qabsaday Sheffield UK Iyo Khudbad uu kasoo jeediyay Ahmed-Jowhary | Somaliland.Org
Shir Ururka UDHIS Ku Qabsaday Sheffield UK Iyo Khudbad uu kasoo jeediyay Ahmed-Jowhary
January 30, 2010	(Somaliland.Org, Sheffield England) Ururuka UDHIS ayaa xaflad ku sameestay magaalada sheffield, hadaba xafladaas ayaa waxaa kasoo qayb galay jaaliyada Somaliland, waxaana halkaa hadal kasoo jeediyay Ahmed-Jowhary, khudbadii Ahmed oo qoraal ahaan nagu soo gaadhay waxay u qorneed sidatan.
Mudanayaal Iyo Marwooyin waxa ii sharaf ah in aan maanta halkan aynu ku kulano oo aan idinka waramo xaalada wadankeenii oo aan dhawaan ka soo laabtay. Dhulkeenii maanta waa nabad, Illaahii nabad-gelyadaa inagu simay ayaa mahadeeda leh. Deganaanshahaa iyo nabada Somaliland ka jirta waxa iyaguna markasta u taagan in ay dhawraan shacabka Somaliland, oo ah kuwa ay sida weyn ee tooska ah ay u taabanayso haddii ay xasiloonidaas ay wax ku yimaadaan. Waxa jira kooxo aan raali ka ahayn deganaanshaha dalka iyo isku duubnida bulshada Somaliland. Waxa aynu ka wada dheregsannahay xaalada cakiran ee ka jirta gobolka maanta. Waxa aad la socotaan in weeraro argagixiso ay ka dhaceen wadankeena, markastana cadawga Somaliland ay maleegayaan shirqoolo wax lagu yeelaynayo nabada dalka iyo dadkeena. Waa illaahay mahadii in kooxahaasi ay ku guul-daraysteen in ay faafiyaan fikirkooda guracan, ee ku salaysan siddii ay u kala qoqobi lahaayeen dadkeena, shaki iyo aamin darana ay uga abuuri lahaayeen heer kasta oo bulsheedana ah, ha ahaato mid dhaqan, mid gobol, mid xisbi siyaasadeed iyo wax kasta uu u fududaynaya in aragtiyahaas ka reebka ahi ay ku xididaystaan wadankeena. Taasi kama dhigna in qataraha wax u dhimi kara dalkeenu ay ka yimaadaan oo keliya meelo ka baxsan xuduudaha Somaliland. Waxa khatar taas la mid ah keeni kara ka-feejignaan iyo dhayalsi aynu dhayalsano xad-gudubyada iyo xil gudasho la’aan ka timaada kuwa loo igmaday in ay ka turjumaan rabitaanka dadkeena. Waxa aynu qaadanay nidaamka Dimuqraadiyada xisbiyada badan, laakiin waxa aynu hadda u muuqaanaa in nidaamkeena dimuqraadiyeed uu magac u yaal uun yahay. Waxa berigii hore badanaa qaarada Afrika ka dhici jirtay in marka uu nin keligii talis ahi uu xukun qori caaradiis uu ku qabsado uu sameyn jiray nidaam uu weligii xukunka ku haysto. Teenu waxa ay maanta u muuqataa keli-talisnimo dhawrkii biloodba dib loo cusboonaysiiyo. Habka iyo heerarka loo maro cusboonaysiinahan ayaa ah kuwo la qabitimay, muuqaalkeeda meel dheer ayaa laga gartaa, waxa ay ku bilaabantaa khilaaf siyaasadeed oo la soo macmalay oo la dhex dhigo golayaasha wakiilada iyo guurtida, khilaafyadaas oo ujeeddada keli ah ee laga leeyahay ay tahay si loo wiiqo rabitaanka shacabka, loogana hortago in doorasho xor iyo xalaal ahi ay wadanka uga qabsoonto. Horaa loo yidhi “Kuwa ilaawa taariikhdooda, waxa lagu ciqaabaa in wixii ay soo mareen lagu celiyo” Waxa wax laga tiiraanyoodo oo aan marnaba la qaadan Karin ah in 30 sannadood ka dib aasaaskii dhaqdhaqaaqii SNM iyo kudhawaad 20 sanno ka dib la soo noqoshadii madaxbanaanida Somaliland, ay xukuumadeenu ay shacab mudaharaadaya ay rasaas kula dhacdo magaalada Hargeysa. Xukuumada talada dalka haysaa wey ku fashilantay xilkii loo igmaday, inta ay wadanka ka talisona wax inaga dhaca mooyee, waxba inoo kordhi maayaan. Waxa ayaan daro ah in aanay ahayn xukuumada oo keliya tan fashilantay, ee waxa daawasho iyo ceeb la qaba labadda xisbi mucaarid oo iyaguna ku guul daraysatay in ay soo bandhigaan barnaamij siyaadeed oo ay dawlad ku hagaan, dimuqraadiyadeena kaga dhigi lahaayeen mid magacaas u qalanta. Wax aan hore u sheegay in xikmada siyaasadu aanay saddex xisbi ku koobnayn, kuna koobnaan Karin. Dadkeenuna ay u qalmaan in loola dhaqmo in ay yihiin kuwo kala garan kara xaqa iyo baadilka, dadka iyo xisbiyada is-bidaya in ay hayaan talooyin taabo gal ah, oo dalka iyo dadka faaiido u lehina ay helaan firaaqadii ay ku soo bandhigi lahaayeen fikirkooda. Khatarta ay leedahay in koox gaar ah, oo u adeega danahooda gaarka ah, oo aan si dhab ah u metalin dadka ay sheegtaan in ay ka wakiil yihiin, oo aan ficilkooda iyo fikirkooda midnaba aan ku salayneyn danta guud iyo halka dawadu ku jirto, oo taas ka door bida dan shaqsi iyo mid xisbi, waxa tusaale cad inoo ah maqiirta ku habsatay walaaleheena Soomaaliyeed, ee 20ka sanno u dabran nin ku danaysta iyo urur aan u diir naxayn. Marka aynu qiimaynayno halka ay Somaliland taagan tahay way haboon tahay in garawsano waxyaabaha inoo qabsoomay, waxa iyana meesha ku jirta in aynu ogaano in aynu ka kororsan karno halka aynu maanta taaganahay. Xoraynta wadanka waxa loo soo maray halgan qadhaadh oo naf iyo moodba leh. Ururkayaga UDHIS waxa uu u taagan yahay in la helo xoriyad buuxda iyo horumar siyaasadeed. ALLAA MAHAD LEH.
Previous PostGuddoomiye-xigeenka Golaha Guurtida oo la sheegay in uu is-casilay iyo fadhigii maanta ee GolahaasNext PostMujaahid Cali Guray oo Laga Hor Istaagay Inuu Fooda Geliyo Xarunta Madaxtooyadda	Blog